Firimu ndicho anodhura bhaibheri firimu nokusingaperi akabudiswa.
Hollywood basa waibvisa pakati pezana 60 apo Max of Sydow akabvuma basa rinoitwa naJesu George Stevens murume weNazareta.
Rinotyisa firimu The Exorcist
Max Von Sydow anozivikanwa kuedzesera mafirimu akadai Ingmar Bergman kuti " The Chisimbiso chechinomwe ", " The vanotodzoka " uye rinotyisa firimu " The Exorcist ."
Ane hwakasimba vachikanda shure kwake uye mumwe okupedzisira mabasa, akashanda " Game of Zvigaro zvoumambo " sezvo Three-achishamisika Raven uye " Star Wars: The Force anondimutsa " sezvo Lör San Tekka.
Hollywood basa waibvisa pakati pezana 60 apo Max of Sydow akabvuma basa rinoitwa naJesu George Stevens ' Munhu weNazareta . "
Firimu ndicho anodhura bhaibheri firimu nokusingaperi akabudiswa. Kunyange zvazvo flopped zvose vateereri uye vatsoropodzi akanga nominated kuti shanu Oscars asi Won hapana.
Never kuwana Oscar
Max Von Sydow kumbogamuchira chinhu Oscar ari firimu nyika - uye akanga achangobva nominated kaviri.
Aiva nemakore 90 okuberekwa.
Vecka 24, fredag 18 juni 2021 kl. 02:22